जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव नियन्त्रणमा सरकारको प्राथमिकता
काठमाडौँ, ८ साउन । सरकारले गत आव २०७१, ७२ मा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव कम गर्न प्राथमिकताका साथ विभिन्न कार्य सञ्चालन गरेको जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयले प्रकाशित गरेको गत आवको मन्त्रालयगत प्रगति विवरणमा जलवायु...
एमाले पार्टी कार्यालय सारिने
काठमाडौँ, ७ साउन । नेकपा (एमाले) को पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा एक हप्ताभित्र स्थानान्तरण गरिने भएको छ । मदननगरस्थित बल्खुमा बस्दै आएको पार्टी कार्यालयमा भूकम्पका कारणले क्षति पुगेपछि त्यहाँबाट कुनै काम हुन सकेको छैन ।...
पाँच दिनभित्र संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाइने
काठमाडौँ, ६ साउन । नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव समितिले सर्वसाधारण जनताले मस्यौदामाथि दिएका सुझावलाई समेटी ढिलोमा पाँच दिनभित्र संविधानसभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने जनाएको छ । समितिका सदस्य प्रेम गिरीले राससलाई दिएको जानकारीअनुसार २४० वटै...
प्रेस काउन्सिललाई संवैधानिक अङ्ग बनाउन सुझाव
काठमाडौँ, ६ साउन । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसमक्ष प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले नयाँ संविधानमा काउन्सिललाई संवैधानिक अङ्गको रुपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दै एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।...
देशविदेशबाट ३३ हजार १६ वटा सुझाव सङ्कलन
काठमाडौँ, ६ साउन । ‘नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा’ माथि मङ्गलबार राति १२ बजेसम्म देश तथा विदेशका व्यक्ति तथा विभिन्न सङ्घ सङ्स्थाबाट ३३ हजार १६ वटा सुझाव सङ्कलन भएका छन् । संविधानसभा सचिवालयका...
काठमाडौँ, ५ साउन । संविधानमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने र वैदेशिक अनुदान तथा सहयोग लिने अधिकार प्रदेशलाई नदिन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारले सुझाव दिएका छन् । नेपाल बैंकर्स...
नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा सभामुखलाई संविधानबारे सुझाव
काठमाडौँ, ५ साउन । नेपाल बार एसोसिएसनले नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रदेशको सीमाङ्कन गरेर संविधान जारी गनुपर्ने लगायतका सुझाव सभामुख सुवास नेम्वाङलाई बुझाएको छ । एसोसिएसनले मंगलबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा पुगी बुझाएको प्रस्तावित...
जनमत सङ्कलन जारी, छिटफुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण
काठमाडौँ, ५ साउन । संविधानसभा सचिवालयले मुलुकभर जनमत सङ्कलन कार्य छिटफुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा जारी रहेको जनाएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ माथि जनताले स्वतःस्फूर्त रूपमा आफ्नो सुझाव दिइरहेका तथा उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाइरहेका छन् । संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने...
समानुपातिकबाट एकै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सांसद हुन नपाउने व्यवस्था गर्न माग
काठमाडौँ, ५ साउन । ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव दिँदै सर्वसाधारणले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत एकै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सांसद हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । संविधानसभाको ‘नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव...
संविधानसभा सचिवालय कर्मचारीलाई सुझाव लिन भ्याइनभ्याइ
काठमाडौँ, । (टिर्र… टिर्र…“नमस्कार ! संविधानसभा सचिवालय, कहाँबाट बोल्नुभयो ? तपाईँको नाम ? के छ तपाईको सुझाव ?”) सोमबार अपराह्न ४ः२५ बजे । संविधानसभा सचिवालयको पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नं १६६००१२२३४४ मा लगातार फोनको घन्टी बजिरहेको...
आठ हजार सुझाव संविधानसभा सचिवालयमा
काठमाडौँ, ४ साउन । नेपालको संविधान, २०७२ को मस्यौदाको सुझाव सङ्कलनको सम्पूर्ण तयारी भएको छ । संविधानसभा सचिवालयका अनुसार मुलुकभरका २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सभासद् तथा कर्मचारीले आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेका छन् । जनमत सङ्कलनलाई व्यवस्थित र...
सप्तरी, ४ साउन । संविधानसभाको मस्यौदामाथि सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा सोमबार सप्तरीको विभिन्न ठाउँमा प्रहरी र मधेसवादी दलबीच झडप भएको छ । प्रहरीसँगको झडपमा परी करिब डेढ दर्जन कायकर्ता घाइते भएका छन् भने ठाउँठाउँमा...
« अघिल्ला 1 … 574 575 576 577 578 … 625 पछिल्ला »